नेपाल टेलिकमले ९० दिनसम्मका लागि अटम अफर उपलब्ध गराउने - Hamro Najar
प्रकाशित मिति: २०७७ आश्विन ३०, शुक्रबार (९ महिना अघि)
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले मोबाइल सेवामा समर अफर अन्तर्गत हाल उपलब्ध गराइरहेको विभिन्न प्याकेजलाई थपरपरिमार्जन गरी आजदेखि ९० दिन लागू हुने अटम अफर उपलब्ध गराउने भएको छ । यसैगरी घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पुर्णिमासम्म लागू हुने ‘दशैं अफर’ र काग तिहारदेखि छठ पर्वसम्म लागू हुने ‘तिहार अफर’ लाई फेस्टिभल अफरका रुपमा उपलब्ध गराउने भएको हो ।
यस अन्तर्गत रु. १० मा ८० एमबी डाटा उपलब्ध भइरहेकोमा अब १२० एमबी र रु. १८ मा २५० एमबी डाटा उपलब्ध भइरहेकोमा अब सोही प्याकेज रु. १५ मा उपलब्ध हुनेछ । फेस्टिभल अफरका रुपमा दशैरतिहार र छठ पर्वलाई समेत समेटी जिएसएमरसिडिएमए मोबाइलको रिचार्जमा कुराकानीका लागि अतिरिक्त मिनेट बोनसका रुपमा उपलब्ध गराइनेछ ।